Abshir Bacadle “Xamid Karzaay ayaa dhaama qolada Dowlada sheegata ee Cadawga AMISOM hoos fadhida”. | Halganka Online
Abshir Bacadle “Xamid Karzaay ayaa dhaama qolada Dowlada sheegata ee Cadawga AMISOM hoos fadhida”.
Golaha Awaaniibta Soomaaliyeed ayaa si kulul u cambaareeyay duqaymaha ay ciidamada Gaalada AMISOM ka gaystaan magaalada Muqdisho xiliyada shacabka magaaladu ku mashquulsanyihiin cibaadada iyo shaqada.
Gudoomiyaha Abwaaniinta Abwaan Abshir Bacadle ayaa sheegay in AMISOM ay yihiin cadaw laayaan ah oo khatar ku ah jiritaanka shacabka Muslimiinta ah, Abshir bacadle wuxuu sheegay in AMISOM hadii sidaan loo fiirsado ay Bakaaraha Burburin doonto islamarkaana ay boob ugaysanayso hantida shacabka Muslimka ah.
“Cadawga AMISOM ee Xasuuqa caadaystay waxay bilaabeen in ay hub khatar ah u adeesadaan duqaymihii cadawtooyo oo ay suuqa bakaaraha ku hayeen, hadda waxay bilaabeen in ay adeegsadaan madaafiic meesha ay ku dhacdo gubayso”.
Abwaan Abshir Bacadle ayaa ugu baaqay shacabka magaalada Muqdisho in ay Jihaadka wada galaan si loosoo afjaro cadawga khatartiisa waxaa kale oo uu is barbar dhigay farqiga u dhexeeya Shariif Murtad iyo Xamid Karzayga Afqaan maqaar saarka ka ah.
“Karzay ayaa dhaama kuwan dowlad sheeganaya ee meelaha ay joogaan dadka laga xasuuqo, Xamid karzay marka dadkiisa lalaayo waa qayla dhaamiyaa inkasta oo uu daba dhilif yahay shariifow maxaad u aamusantahay”ayuu yiri Abshir Bacadle.
Abwanada magaalada Muqdisho ayaa hadda umuuqda in ay soo ceshteen kaalintii ay ku lahaayeen difaaca shacabka Muslimka ah oo ay gaaladu dhibaato ku hayso.
« Saraakiisha Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ee shalay gaaray degmada Ceelbarde oo kulamo laqaatay Shacabka Muslimiinta ee degmadaasi ku Nool. Mujrim Axmed Madoobe oo Cadaystay in uu yahay shariica diid kadib markii Xisbul Islaam ay Iska Eryeen. »